Xarun Fiisaha Turkiga lagu bixin jiray oo musuq-maasuq loo xiray | KEYDMEDIA ONLINE
25 October 2021 CCW oo markii ugu horreysay ka hadlay dagaalka Guriceel
MUQDISHO, Soomaaliya - Xaruntii MZ VISA ee Muqdisho ayaa albaabada la isagu dhuftay kadib markii la ogaaday inay noqotay meel musuq-maasuqa oo la degay, oo shacabka Soomaaliyeed ee codsanayay dal ku galka Turkiga lagu dhici jiray.
Waxay arintaan soo shaac-baxday markii uu Khayre Xafiiska ka tagey July 25, iyadoo dhalinyaro laga keenay Hargeysa, oo awood badan siiyay sii hayaha Ra'iisul Wasaaraha Mahdi Maxamed Guuleed [Khadar] ay meesha kala wareegeen dhalinyaradii horey u shaqeyn jirtay.
Waxay xarunta noqotay mudo kooban oo dalka ka maqan yahay Khayre goobta ugu musuq-maasuqa badan Xafiisyada dowladda maamusho, ee ku yaalla Muqdisho, iyadoo lacago aad u badan ay ka samaynayeen wiilal laga keenay Somaliland, oo Mahdi nuus-nuujiyo.
Shacabka Soomaaliyeed ayaa dal ku-galka Turkiga ka codsan jiray xagiiska MZ VISA, iyadoo labadii bilood ee ugu dambeeyay sare u kac xoog leh laga dareemayay qiimaha Fiisaha lagu dalbado, oo ku dhawaad $200 gaartay.
Safaaradda Turkiga ayaa ugu tala-gashay xaruntan in dowladda maamusho, si dadka loogu fududeeyo helidda Fiisaha, oo horey dhibaato ugu qabeen inay toos u tagaan Safaaradda, maadaama xaalad amni darteed qof walba u tagi karin.
MZ VISA ayaa hadda la xiray, waxaana la joojiyay shaqadii bixinta Fiisaha illaa laga dhisayo Xukuumad cusub, oo howsha la wareegta.
Muqdisho ayaa noqotay meel ay usoo shaqo doontaan dhalinyaro ka timaada degaanada Somaliland, kuwaasoo intooda badan laga shaqaalaysiiyo xafiisyada Madaxda ku heebta ah, sida gudoomiyaha Maxkamadda Sare, ku-simaha Ra'iisul Wasaaraha Mahdi iyo Wasiirka Warfaafinta, iyadoo kuwa kalena reer Muqdisho ku dhacayaan dhaqaalahooda FOREX been ah.
0 Comments Topics: fiisaha turkiga mahdi maxamed guuleed khadar turkiga
Xaraashka Shidaalka Soomaaliya ee ka socda Turkiga ayaa imaanaya, iyadoo oo anay wali dhamaystirnayn hay'adihii uu sharcigu farayay inay ka shaqeeyaan arrimaha la xiriira khayraadka dalka.
Turkiga iyo Soomaaliya oo iska kaashanaya dagaalka Al-Shabaab
Warar 4 September 2021 21:23
Warar 12 June 2021 11:33
Qoysas u baroordiiqaya dad looga dilay qarax ka dhacay Soomaaliya
Warar 5 January 2021 15:47